हास्यव्यंग्यका लागि गाइजात्रा नै कुर्नुपर्छ र ? ~ The Nepal Romania
कुर्नैपर्ने औचित्य समाप्त भैसक्यो । पहिले गाईजात्राका अवसरमा गाईजात्रे कार्यक्रम गरिने बानेश्वरको हलमा अहिले ३ सय ६५ दिन नै गाईजात्रा भैरहेको छ । पहिलेका शासक कडा थिए र मनको असन्तुष्टि पोख्न गाइजात्रा कुर्नुपथ्र्यो । अहिलेका त शासक नै गाईजात्रा गर्दैछन् । बरु हामीलाई पो अप्ठेरोमा पारेका छन् ।
केदार घिमिरे माग्नेबूढा’ -हास्यकलाकार)
पर्दैन, अब कुर्नै पर्दैन । राजा, राणा र नेताले गाईजात्रा सिकाएका हुन् । राजा जगतप्रकाश मल्लले गाईजात्राको चलन चलाए । राणाले एक दिन भए पनि छुट दिए । अब त नेताहरूले नै हास्यअभिनेतालाई वास्तवमा कसरी गाईजात्रा गर्ने भनेर ३ सय ६५ दिन नै सिकाइरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो नेपालमा जहिले पनि गाईजात्रा हेर्न पाइएको छ ।
दीपेन्द्र खनियाँ -सञ्चालक, रेडियो अडियो)
देशको स्थिति देख्दा रुनु न हाँस्नु भैसक्यो । हाँस्नलाई गाईजात्रा कुर्नुपर्दैन । नेताहरूको क्रियाकलाप हेरेर पेट मिचीमिची हाँस्न सकिन्छ । पुगेन भने टेलिभिजन च्यानलहरूमा दैनिक एउटा न एउटा हास्यव्यंग्य कार्यक्रम आएकै हुन्छ । अझ त्यतिले पनि पुगेन भने समाचार हेरेर हाँस्दा पनि हुन्छ ।
अंशु महर्जन -हास्यअभिनेत्री)
किन कुर्नुपर्‍यो र ? देश चलाउनेहरूको गाईजात्रे तालले देशको उपनाम नै गाईजात्रे हुन लागिसक्यो । पहिले गाईजात्रे कार्यक्रम हुने स्थानमा त्यस्ता गाईजात्रे नाटक दिनहुँ चलिरहेकै छ । जनताले दिएको तलब खाएर जनतालाई झुक्याउने नाटक गरिरहेका नेताहरूको नौटंकी हेरेर त्यत्तिकै हाँसो उठ्छ । त्यसका अघिल्तिर गाईजात्रे हास्यव्यंग्य पनि फिक्का हुन्छ ।
राजकुमार शाह -अभिनेता)
हामीजस्ता हास्यकलाकारहरूले त कुरेकै हुन्छौं । किनभने गाईजात्रामा जस्तो गरी मन फुकाएर व्यंग्य गर्न अरू बेला मज्जा आउँदैन । गाईजात्राका बेला एक साताभरि सधैं प्रहसन गरेर हँसाइरहन पाइन्छ । बाह्रै महिना विभिन्न प्रहसन गरेर हँसाइरहेका र टेलिभिजनमा कार्यक्रमबाट दैनिक हँसाउने कलाकारहरूका लागि गाईजात्रा महोत्सव नै हो । त्यसैले अरूले कुरुन् कि नकुरुन्, म त कुर्छु बा ।
पल्पसा डंगोल -हास्यअभिनेत्री)